La Yaabka Aduunka: Ilmo sanad jir oo dacwad ku soo oogay diyaarad caan ah, sabab? – SBC
La Yaabka Aduunka: Ilmo sanad jir oo dacwad ku soo oogay diyaarad caan ah, sabab?
Ilmo yar oo hal sano jir ah ayaa la filayaa in uu dacwad ku soo oogo oo waliba maxkamad la koro shirkada diyaaradaha ee Virgin Airlines , isagoo ku doodaya in cunto uu ka cunay diyaaradaasi xili uu hooyadiis la safarayey uu ku sumoobay, xili imahaasi aanu dhalan oo uu ku jiray caloosha hooyadiis.
Renee Cherry oo ah hooyada wiilkan dhashay ayaa iyadoo ku hadlaysa magaca wiilkeeda waxay sheegtey in ay maxkamad la soo istaagi doonto maamulka shirkada Virgin Airlines ee wadanka Australia, iyadoo sheegtey in wiilkeeda uu ku simoobay uurkeeda ka dib markii ay cuntay cunto sumaysan gaar ahaan hilib dooro xili ay ku safraysay diyaarada Virgin Airlines.
Wiilka ay hooyadiis u doodayso ee hal sano jirka ah ayaa lagu magacaabaa Zayd Fokeera, waxaana hooyadiis Renee Cherry ay sheegtey in talaabo sharci ah ay u mareyso in ay wiilkeeda u hesho magdhow ku aadan in caaafimaadkiisa waxyeelo ay ka soo gaartey cuntadaasi. Gal dacwadeed loo gudbiyey maxkamada sare ee dalka Australian ayaa lagu xusey in Uurley Ms Cherry ay ku duushay diyaarada Virgin Airlines oo isaga gooshaysay wadanka Australia magaalooyinkiisa Townsville & Brisbane, ka dibna Brisbane ilaaMelbourne, 23-kii May 2009.
Intii diyaaradu hawada ku jirtey Ms Cherry waxay iibsatey hilib digaag iyadoo ka qaaday xanuun ay ku simowday.
“Duubka digaaga ah ma ahan mid loogu tala galay in bini’aadanku cuno waxaana uu lahaa jeermis ama listeria bacteria oo ah cunto ku somow” ayaa lagu yiri warbixinta.
Zayd wuxuu dhashay laba bil ka dib safarkaasi iyadoo la sheegay in jeermii cuntadaasi uu ka qaaday in ay u keentey xanuuno dhanka caafimaadka ah.
Afhayeen u hadley Virgin Airlines ayaa sheegay aysan adeeg diyaarada loogu sameeyey magacaasi, waxaase ay sheegeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan dhacdadaasi.